Qalbi Cusub, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland Switzerland (WKG)
53 jirkan reer cagaaran ee Louis Washkansky wuxuu ahaa qofkii ugu horreeyay adduunka ee laabta qalbigiisa laabta ku nool. Waxaa saacado dhowr ah qalliin ku sameeyay Christiaan Barnard iyo kooxda 30-qalliin ee xoogga leh. Fiidnimadii 2-dii Diseembar, 1967, ayaa karraaniyaal 25-jir ah Denise Ann Darvall la keenay rugta caafimaadka. Waxay soo gaadhay dhaawacyo maskaxda ah oo dilaa ah kadib shil baabuur oo halis ah. Aabaheed wuxuu oggolaaday ku-deeqidda wadnaha waxaana la keenay Louis Washkansky qolka qalliinka si looga beddelo wadnaha ugu horreeya adduunka. Barnard iyo kooxdiisu waxay u aasteen xubin cusub. Kadib shoog koronto, wadnaha gabadha yar ayaa bilaabay inuu garaaco feeraha. Markay ahayd 6.13 subaxnimo qalliinku wuu dhammaaday dareenkuna wuu fiicnaa.
Sheekadan cajiibka ah waxay i xasuusisay isbadal ku saabsan wadnahayga. In kasta oo aanan “qaadin jidheed qalbi jireed”, dhammaanteen Masiixiyiintii lasocda waxaan ku soo marnay qayb ka mid ah hanaankan. Xaqiiqada naxariis darrada ah ee dabeecaddayada dembiga leh ayaa ah inay ku dhammaan karto oo keliya dhimashada ruuxiga ah. Nebi Yeremyaah si cad ayuu u yidhi: «Qalbigu waa wax is-hoosaysiin iyo rajo xumo, Kumaa garan kara? (Yeremyaah 17,9).
Marka la eego xaqiiqada ah “xaaladdiisa ruuxiga ah ee qalbiga”, way adkaan kartaa in rajo la yeesho. Isaga, fursadda noolaantu waa eber. Waxaa la yaab leh, Ciise wuxuu ina siinayaa fursadda keliya ee suurtagalka nolosha ruuxiga ah.
«Waxaan rabaa inaan ku siiyo qalbi cusub iyo ruux cusub oo kugu dhex jira waxaanan rabaa inaan qalbigi dhagaxa ka soo qaado jidhkaaga oo aan ku siiyo qalbi aadanaha ka buuxa» (Yexesqeel 36,26).
Wadno wareejin? Su’aasha ayaa had iyo jeer kacda: yaa qalbigiisa ku deeqa? Qalbiga cusub ee Eebbe doonayo inuu na dhex abuuro kama yimaado dhibbane shil. Waa qalbiga wiilkiisa Ciise Masiix. Rasuul Bawlos wuxuu ku sharraxay hadiyaddan ikhtiyaarka ah ee Masiixa loo siiyay cusboonaysiinta dabeecaddayada bini-aadamka, beddelaadda ruuxeenna iyo xoreynta doonisteenna. Bixintan oo dhan-iskuxiran ayaa ina siineysa fursadda cajiibka ah ee aan ugu beddelan karno qalbiyadeenna hore, dhimatay qalbigeeda cusub, oo caafimaad qabta. Qalbi ka buuxi jacaylkiisa iyo nolol weligeed ah. Bawlos wuxuu sharraxay: «Waxaan ognahay in odaygeennii hore iskutallaabta lagula qodbay isaga si jidhkii dembigu u baabba'o si aynaan mar dambe dembiga ugu adeegin. Waayo, kii dhintay dembi wuu ka xoroobay oo xaq baa laga dhigay. Laakiin haddaynu Masiixa la dhimannay, waxaynu rumaysan nahay inaynu haddana isaga la noolaan doonno » (Rooma 6,6-8).
Ilaah wuxuu Ciise ku beddelay is-beddel cajiib ah si aad ugu noolaato nolol cusub oo isaga ku dhex noolaato, isaga la yeelato isaga oo ka qaybqaato wehelnimada Aabaha Ruuxa Quduuska ah.
Ilaah wuxuu gelinayaa qalbigaaga cusub oo wuxuu kugu neefsanayaa kan kale, ruuxa cusub ee wiilkiisa. Waxaad ku nooshahay oo keliya nimcada iyo naxariista Badbaadiyaha iyo Bixiyaha Ciise Masiix!